Jeneraly - Vaovao Gadget | Vaovao Gadget (Pejy 6)
Nahazo isa tsara ny fampiasana ny contactless any Espana. Tamin'ny taona lasa 2017 dia nitombo 50% ny fitomboan'ny mpampiasa
Raha miseho tsy tapaka eo amin'ny fitaovanao ny hafatra "ny fizotran'ny com.google.process.gapps" dia ireto misy dingana tokony harahina hamahana azy.
Google dia nanangana azy ho ofisialy fa, taorian'ny niandrasana ela ny fankatoavana ilaina dia nividy ampahany amin'ny fizarana finday HTC izy ireo ho takalon'ny $ 1.100 miliara.
Ilay mpihira 50 Cent dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny kaonty Instagram azy, noho ny fivarotana ilay rakikira izay navoakany tamin'ny 2014 ary noho izany dia navelany hampiasa ny bitcoin ho endrika fandoavam-bola, dia manana vola mitentina 7 tapitrisa mahery izy izao
Ahoana ny fomba handaminana ny fanidiana mandeha ho azy amin'ny Windows sy Mac
Raha tsy tiantsika ny PC na Mac handany ora maro mihoatra ny ilaina amin'ny fandidiana, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny fandaharana ny fanidiana mandeha ho azy, na amin'ny Windows na amin'ny Mac. Fantatrao ve ny fomba hanaovana azy? Mampianatra anao fomba maromaro izahay hanidiana ny solosainanao amin'ny fotoana itiavanao azy.
Telefónica dia hampiditra ny atiny Netflix ao amin'ny Movistar +
Nifarana ny ady: hampiditra atiny ao amin'ny Movistar + i Netflix. Fantaro bebe kokoa ny fanapahan-kevitr'ireo orinasa roa ireo hiara-miasa sy hampiditra atiny.
Clips, ny fakantsary fakan-tsarin'i Google dia amidy ankehitriny
Andao hojerentsika izay atao hoe Clips, ilay fakan-tsary Google vaovao izay mampiasa Artigence Intelligence haka sary.
Amazon dia nanamarina zavatra taloha tamin'ny Amazon Go
Mijanona miaraka aminay rehefa hijery ny fomba fiasan'ity mekanisma vaovao ity izay tadiavin'i Amazon amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana rehefa mividy.
Facebook koa dia manolo-tena handefa lalao video
Hiditra amin'ny streaming ny lalao video koa ny Facebook. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapahan-kevitry ny orinasa sy ny antony hidirany amin'ity sehatra ity.
Intel dia efa miasa amin'ny processeur tsy azo ihodivirana amin'ny Spectre sy Meltdown
Intel dia efa miasa amin'ny processeur tsy azo ihodivirana amin'ny Spectre sy Meltdown. Fantaro bebe kokoa ny drafitry ny orinasa hananganana processeur vaovao.
Nissan dia manolotra ireo kapaosy voalohany izay "mametraka" ny tenany
Raha mikasa ny hividy ny kiraronao na kapa ianao any an-trano, fantatra amin'ny hoe slipo, dia ao ...
Nijirika ny fivarotana OnePlus an-tserasera, misy resaka momba ny mpampiasa 40.000 voakasik'izany
Tsy ny zava-drehetra no fandriana raozy ao amin'ny OnePlus ary ny marika ihany no manamarina fa nijaly izy ireo ...
Mandany bebe kokoa amin'ny streaming mozika mihoatra ny taloha tao amin'ny CD izahay
Araka ny fanadihadiana farany, vola bebe kokoa amin'ny mozika dizitaly no ampiasainay noho ny fampiasam-bola amin'ny endrika toy ny CD na vinyl.
PcComponentes, e-varotra sarobidy indrindra amin'ny tambajotra sosialy amin'ny 2017
Azo antoka fa raha mipetraka any Espana ianao dia fantatrao ny fivarotana an-tserasera PcComponentes. Eny, ity fivarotana vokatra mifandraika amin'ny teknolojia ity, ...
Famerenana ny Wiko Wim, terminal eo anelanelany amin'ny vidiny tena manintona
Ny orinasa frantsay dia manolotra antsika ny Wiko Wim, tobim-paritany antonony miaraka amin'ny fampisehoana sy sandam-bola azo ekena.
Tantaram-pitiavana: sampan-draharahan'ny alfabeta vaovao natokana ho an'ny filaminana anaty cyber
Tantaram-pitiavana: orinasan-tserasera vaovao momba ny «cyber». Fantaro misimisy kokoa momba ny sampana vaovaon'ny orinasa natokana hanatsarana ny filaminan'ny orinasa.
Noho io antony io dia tsy tokony hitsako bateria finday mihitsy ianao.
Izahay dia manome anao horonan-tsary manazava izay hanazava tsara ny antony tsy tokony hanaikitra bateria finday na oviana na oviana.
Nespresso sa Dolce Gusto? Inona no mahasamihafa azy ary iza no mety amiko indrindra
Masinina kafe Nespresso sy masinina kafe Dolce Gusto, rafitra roa hanomanana kafe mampiasa kapsily fa na dia mety tsy ho fantatry ny sasany aza izy ireo dia manana fahasamihafana lehibe izy ireo, hasehonay anao izy ireo.
Ny Handmaid's Tale dia manamafy ny vanim-potoana faharoa amin'ity topi-maso ity
Ny Handmaid's Tale, notombanan'ny Emmy sy ny Golden Globe fa nihaza tamin'ny sokajy mpanjakavavy tamin'ny efijery kely, dia nanamafy fa hanana vanim-potoana faharoa amin'ity taona 2018 ity.
Misokatra izao ny fivarotana lehibe voalohany any Amazon, Amazon Go
Ny fivarotana lehibe voalohany tsy misy mpitambola ao amin'ny orinasa Amazon dia misokatra anio alatsinainy eo amin'ny lalana izay ...
Ahoana ny fomba hifehezana sy hamerenana ny PlayStation 4 anao amin'ny lavitra ny fahitalavitra Smart
Hasehonay aminao ny fomba fitantanana mivantana ny PlayStation 4 miaraka amin'ny lavitra fahita lavitra amin'ny fahitalavitra.
Samsung dia nanome pataloha finday finday avo lenta miaraka amin'ny efijery 100%
Samsung dia mametraka patanty ho an'ny telefaona efijery 100%. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao izay nopotsahan'ny orinasa Koreana.
Google manamboatra ny olana, afaka manavao ny Chromecast izahay
Google dia nanomboka niasa tamin'ny famahana ity olana kely ity, nahavita nametaka ny bibikely ilay orinasa, ka raha manana fanavaozana Chromecast ianao izao.
Ahoana no hizarana ny fifandraisana WiFi anao amin'ny kaody QR
Tsy tianao ny manome ny angona fidirana amin'ny fifandraisana WiFi any an-tranonao? Manoro hevitra anao izahay hanao izany amin'ny alàlan'ny kaody QR
Ny OnePlus dia manamafy ny fangalarana data avy amin'ny tranonkalany
Mpampiasa hatramin'ny 40.000 no tratry ny halatra data OnePlus. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanamafisan'ny orinasa ny hack nijaliana tamin'izy ireo tao amin'ny tranonkalany.
Instagram dia manambara hoe oviana no fotoana farany nifandraisanao ary hahafahanao manamboatra azy
Instagram dia nanampy singa vaovao ao amin'ny fanavaozana farany. Ary izao dia azo atao ny mahita ny asan'ny fifandraisanao na ny mpanaraka anao. Saingy manazava ny fomba famonoana azy izahay
Manadihady ny mpandahateny, ny fahefana ary ny fanaraha-maso tsy misy tariby an'ny SPC
Androany izahay dia manolotra iray hafa ao anatin'ireo mpandahateny isan-karazany, ny SPC Bang, mpandahateny iray manana habe sy hery tsara azonao apetraka amin'ny ampahany tadiavinao ao an-tranonao.
Ho somary sarotra kokoa ny fandefasana vola amin'ny YouTube
YouTube dia manamafy ny lalàna momba ny fandraisana vola amin'ny atiny. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fepetra vaovao noraisin'ny tranonkala tamin'ity fotoana ity.
Google Chromecast dia mety manaparitaka ny tamba-jotra WiFi anao
Misy bibikely hita ao amin'ny fitaovana Google Chromecast ahafahan'izy ireo manaparitaka ny tamba-jotra WiFi, mamela anao tsy hanana fifandraisana Internet
Ny MacBook Air dia feno folo taona ary ankehitriny
Hanao famerenana kely momba ny tantaran'ny MacBook Air izahay, solosaina finday iray izay lasa referansa amin'ny tsena iray manontolo nandritra ny fotoana ela
Ity ny mozika natolotr'i Obama ny taona 2017
Atolotray ny lisitr'i Spotify izay anoloran'i Barak Obama ny taona 2017, Ny tena zava-misy dia tsy vao izao i Barak Obama no naka an'io karazana fahalalahana io ka tsy dia fahita firy amin'ireo olona manana ny vokany manerantany.
Ny vahaolana Intel's Meltdown sy ny Specter dia mamerina miverina amin'ny solo-sainanao
Tsy azonao atao ny milaza fa ny valin'ny Intel momba ny olan'ny Meltdown sy ny Specter dia miadana, saingy izany ...
Netflix dia tsy tonga ao amin'ny Nintendo Switch amin'izao fotoana izao
Ny Nintendo Switch dia mbola tsy hankafy an'i Netflix amin'izao fotoana izao. Fantaro bebe kokoa ny olana sedrain'ny console malaza sy ny fifampiraharahana izay tsy mandroso.
Na aiza na aiza ary na aiza na aiza no tadiavinao amin'ny Energy Earphones 6 True Wireless [Fanadihadiana]
Mijanona miaraka aminay ary mamakafaka amin'ny antsipirihany ny angovo Earphones 6 True Wireless avy amin'ny orinasa Alicante, tena fanoloana ireo vokatra lafo kokoa ary tsy voatery ho tsara kokoa.
Tao anatin'ny ora vitsivitsy dia namaha ny olana momba ny fanavaozana ny Mi A1 i Xiaomi
Ny marina dia ankasitrahana fa nametraka ny batery tamin'ity olana ity ny orinasa sinoa ary tao ...
I Tag Heuer dia mampifanaraka ny fantsom-pandehany mankany amin'ny fehin-tànana kely indrindra
Ny marika famantaranandro Suisse Tag Heuer dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Tag Heuer Connected 41, maodely iray misy savaivon'ny efijery 41 mm ary natokana ho an'ireo rehetra manana tanana kely.
Ny fampandrenesana balafomanga izay nampihozongozona an'i Hawaii, ahoana no hitrangany?
Tany Hawaii vao maraina, nisy mpanolo-tsaina naharitra efa-polo minitra nanitsiana azy ary nahatonga ny olom-pirenena maro hieritreritra fa mety hovonoin'ny fanafihana balafomanga.
Mijanona amin'ny fivarotana drôna ny GoPro ary manala mpiasa maherin'ny 250
Mandao ny fanamboarana sy fivarotana drôna ho an'ny tsara i GoPro. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapahan-kevitry ny orinasa handao ity orinasa ity.
Noteren'ny Facebook hamaky ilay boaty ny fampahalalam-baovao sy ny orinasa hanehoana ny atiny ao amin'ny tambajotra sosialy
Vao nanambara ny tambajotra sosialy Facebook fa hijanona tsy hampiseho ireo zavatra vita an-tsoratra avy amin'ny haino aman-jery sy ny orinasa voalohany mba hanao laharam-pahamehana ny atin'ny namana sy ny fianakaviana, ka izany no antony namoronana ity serivisy ity.
NASA dia nanambara tahirin-dranomandry tena lehibe vao hita tao Mars
Vao nanambara i NASA fa, taorian'ny andiam-panadihadiana sy fanandramana maromaro, dia nahitan'izy ireo ny fisian'ny tahirin-dranomandry be dia be any Mars.
Tsaho maromaro milaza fa tsy hanolotra ny P20 ao amin'ny MWC i Huawei
Tsy misy isalasalana, ny fisian'ny vaovao ratsy ho an'ny mpampiasa marobe izay miandry ny safidy hafa amin'ilay maodely marika ...
Lenovo New Glass C220, fanoloran-tena vaovao hampitombo ny zava-misy
Na eo aza ny fihaonan'ny Lenovo tao amin'ny CES omaly momba ny drafitra indostrialy fohy sy ny vaovao momba ny vokatra, dia manolotra antsika izy ireo anio, tsy misy fampandrenesana mialoha, ilay New Glass C220 vaovao, vera feno zava-misy namboarina niaraka tamin'ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Intel dia hametaka saika ny processeur rehetra hampitsaharana ny Specter sy Meltdown
Intel dia hametaka ny processeur rehetra latsaky ny 5 taona amin'ny faran'ny volana mba hamaranana an'i Meltdown sy i Spectre amin'ny indray mitoraka iray.
Casio dia misoratra anarana amin'ny smartwatches, saingy amin'ny fombany
Casio dia nandefa fanontana manokana ny laharam-pahamehana G-Shock malaza misy ao anatin'izany ny fifandraisana GPS sy ny fahaleovan-tena noho ny tara-masoandro.
Apple nanao hetsika hafahafa mamela anao hametraka kinova taloha amin'ny iOS
Apple dia manao andiana hetsika hafahafa izay tsy mahazatra ao amin'ny orinasa ary izany dia ny ...
Sony miloka amin'ny feon-kira avo lenta ao amin'ny CES
Sony dia te-gaga anao amin'ny feo toa avoaka avy amin'ny valindrihana, ny haitao avy amin'ny lafiny efatra, andao hojerentsika izay misy an'ireo vaovao ireo.
Tsara indrindra amin'ny CES 2018
Ny iray dia nahavita ny tsenan'ny teknolojia mpanjifa lehibe indrindra izay natao herintaona tao Las any Las Vegas, fotoana izao hamintinana
JBL dia manolotra ireo mpandahateny vaovao azo entina
Ny endrika JBL, izay ao anatin'ny vondrona HARMAN International, izay eo am-pelatanan'ny Samsung, dia nanolotra mpandahateny portable telo vaovao tonga hisolo ireo teo alohany: JBL Clip 3, JBL GO 2 ary JBL Xtreme 2
Ireo no Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ary L2 vaovao
Ny Sony iraisam-pirenena japoney Sony dia nanolotra tao amin'ny CES ny elanelam-potoana vaovao hanombohany eny an-tsena mandritra ity taona ity: Xperia XA2, Xperia XA2 Ulta ary Xperia L2
Kodak dia hanana cryptocurrency manokana
Kodak dia mandefa ny cryptocurrency KODAKCoin azy manokana. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny vola dizitaly vaovao nataon'ny orinasa.
Fisker E-motion, mpifaninana lava ho an'i Tesla
Manararaotra ny famakiana ny haavony sy ny fanaparitahana toy ny CES 2018, te-hahagaga ny olona sy ny olon-tsy fantatra i Fisker amin'ny alàlan'ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny kinova voalohany na ny prototype an'ilay hetsika Fisker E mahagaga.
Sony dia manohy miasa amin'ny OLED miaraka amin'ireo fahitalavitra 2018
Ireo tovolahy avy amin'ny Sony dia nanolotra ny fahitalavitra farany ambony ho an'ny taona 2018, mifantoka indrindra amin'ny Android TV, ny teknolojia HDR 10 ary mazava ho azy ny rafitra OLED.
ASUS dia manolotra tsipika vaovao ho an'ny Mini PC amin'ny CES 2018
ASUS dia ao amin'ny CES 2018. Ary teo no nanolorany andalana solosaina mini vaovao hanomezana fahafaham-po ny filàna rehetra
AOC dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanohanan'ny esports manerantany miaraka amin'ny G2 Esports
Ankehitriny, ny e-fanatanjahan-tena dia manohy mahazo tany manerantany ary mba hiasa izany rehetra izany dia takiana ...
Panasonic Lumix GH5S, fakan-tsary tsy misy taratra, horonantsary 4k ary ISO an'ny 51.200
Ny orinasan-japoney Panasonic, dia nanolotra ny mpandimby ny GH5, ny GH5S, miaraka amin'ny ISO izay mahatratra 51.200 ho zava-baovao raha oharina amin'ilay teo alohany.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Elgato Thunderbolt 3 mini Dock vaovao
Ireo kojakoja fanaovana sonia Elgato dia eken'ny tontolon'ny teknolojia amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Raha izany dia…
ThinQ, vata fampangatsiahana marani-tsaina misy efijery 29 ″ avy amin'ny LG
Ny vata fampangatsiahana matanjaka dia tsy ho afa-mandositra azy, ary izany dia mihamaro ny mpampiasa misafidy an'ity karazana fitaovana ity mba hanatsara ny andavanandrony, izany no ilain'ny ThinQ.
NVIDIA dia milatsaka ho kandidà ho ivon'ny fiara mizaka tena noho Xavier
Manararaotra ny fankalazana ny CES 2018, NVIDIA dia nanjary naneho ny sehatra mahaliana azy amin'ny familiana tsy miankina, izay efa manomboka manandrana ireo orinasa toa an'i Volkswagen sy UBER ankehitriny.
Ny varotra kasety dia nitombo tamin'ny 2017
Tamin'ny taon-dasa 2017, nitombo be ny varotra kasety. Izany dia noho ny feon-kira roa an'ny famokarana izay miloka amin'ny Retro
Ny carte de crédit voalohany tsy misy ifandraisany amin'ny mpamaky ny rantsantanana dia zava-misy ankehitriny
Ny carte de crédit voalohany tsy misy ifandraisany amin'ny mpamaky ny rantsantanana dia zava-misy ankehitriny. Fantaro bebe kokoa momba ity carte de crédit Gemalto ity
Solosaina finday vaovao an'i Acer ao amin'ny CES: Swift 7, Nitro 5 ary Chromebook vaovao
Acer dia ao LAs Vegas toerana anaovana ny foara teknolojia CES. Tamin'ity taona ity dia naka solosaina finday maromaro ho an'ny tsiro rehetra
Te hiverina amin'ny volana i Sina amin'ity taona ity, amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny fandefasana zavamaniry sy bibikely
Tian'i Shina hiverina any amin'ny Moon amin'ity taona 2018 ity, taona iray izay iraka marobe amin'ny satelita no nomanin'ireo masoivoho isan-karazany ary handray lavitra kokoa i Shina amin'ny alàlan'ny fandefasana zavamaniry sy bibikely.
Ny iPhone X, fanomezana tadiavina indrindra amin'ity Krismasy ity
Rehefa avy niandry volana roa hatramin'ny nanombohany teny an-tsena ary rehefa nahita ny zavatra henontsika fotsiny momba ny iPhone X dia izao no fotoana mety indrindra hividianana ny iPhone X.
Samsung dia manambara ny angon-drakitra Exynos 9810, ilay mpikirakira ny Galaxy S9
Exynos 9810 izao dia ofisialy: ny processeur an'ny Samsung Galaxy S9. Fantaro bebe kokoa momba ny processeur vaovao an'ny Samsung ho avy tsy ho ela.
Lyric T6R, notsapainay ny termostat mifandray amin'i Honeywell
Lyric T6R, ny thermostat marani-tsaina izay omen'ny Honeywell ho an'ny rehetra ary hahafahanao mahazo fampiononana sy hitsitsy amin'ny fanjifana angovo.
Samsung dia manolotra ny monitor voalohany amin'ny teknolojia QLED, ny fifandraisana curved ary ny Thunderbolt 3
Ny orinasan-tserasera koreana Samsung dia natolotra, andro vitsivitsy talohan'ny fankalazana ny CES, mpanara-maso miolakolaka voalohany miaraka amin'ny teknolojia QLED sy ny fifandraisana Thunderbolt 3
Mety hanimba ny fahasalaman'ny tanora ny Instagram
Ahoana raha hitantsika fa misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamana ara-tsaina amin'ireo tanorantsika ny Instagram? Izany no tondroin'ny fanadihadiana farany.
Nahita hadisoam-piarovana matotra ao amin'ny Intel CPUs
Vao nambara fa ny processeur an'ny Intel novinaina 10 taona lasa izay dia tsy manana fahalemena matotra izay mahatonga azy ireo hahavery fampisehoana marobe.
Amazon dia namidy vokatra maherin'ny 5.000 miliara tamin'ny alàlan'ny programa Prime tamin'ny 2017
Ireo tovolahy avy any Amazon dia namoaka ny isa vitsivitsy azon'ny orinasa nandritra ny taona 2017 na ao anatiny na ivelan'ny programa PRIME
Google dia manandrana ny Fuchsia OS amin'ny Pixelbooks
Google dia manohy miasa amin'ny rafitra fiasa manaraka antsoina hoe Fuchsia OS. Ary namoaka ny antontan-taratasy ahafahana mametraka azy ao amin'ny Pixelbooks
Ny fizakantenan'ny fiara elektrika dia nitombo mihoatra ny 50 isan-jato tao anatin'ny 6 taona
Araka ny lohatenin'ity vaovao ity, ny fizakantenan'ny fiara elektrika dia nitombo mihoatra ny 50 isan-jato ...
Ahoana ny fomba firaketana ny efijery amin'ny PC Windows 10 anao
Androany izahay dia manazava amin'ny fomba tsotra ny fomba firaketana ny efijery ao amin'ny Windows 10, amin'ny alàlan'ny rindranasa teratany sy ireo fampiharana an'ny antoko fahatelo.
Tsy mitsahatra ny manamarina ireo fanavaozana an'i Windows Update? Azonao atao ny manamboatra azy io
Windows Update dia mijanona amin'ny fotoana maro mitady fanavaozana ary hahafahanao mamaha azy amin'ny fomba tsotra atolotray anao ity fampianarana ity.
Rosia very satelita 45 tapitrisa euro noho ny "kajy diso"
Araka ny voalazan'izy ireo dia mitranga izany na dia ao amin'ny fianakaviana tsara indrindra aza. Azoko antoka fa nisy naka ...
Diso fandefasan'i Elon Musk ny nomeraon-telefaoniny tao amin'ny Twitter
Ka araka ny filazantsika azy dia namoaka tsy nahy ny nomeraon-telefaonany ny CEO an'ny Tesla ho an'ny akaiky ...
Ireo no lalao maimaim-poana amin'ny Janoary 2018 ao amin'ny PlayStation Plus
Hahafantatra izay lalao maimaim-poana amin'ny PlayStation Plus amin'ny Janoary 2018 isika, saingy tsy maintsy milaza aminao aho fa misongadina ambonin'ny zava-drehetra ny Deux Ex.
Izahay dia mamakafaka ny headphones Nix avy any NewSkill
Manadihady ny headset Bluetooth Nix Newskill ho an'ny mpilalao isika, na dia noho ny fahaizany aza dia azo ampiasaina amin'ny toerana rehetra izy ireo
Hitsahatra tsy hiasa amin'ny sehatra roa ny WhatsApp amin'ny faran'ny taona
Ny antony mahatonga ny tsy ampoizina dia satria amin'ny 31 Desambra, hitsahatra tsy hiasa amin'ny sehatra finday roa ny WhatsApp, hampihena ny fifanarahan'izy ireo.
Ny batterie goavambe an'i Tesla any Aostralia dia mampiseho ny mety hitranga
Ny bateria goavambe napetrak'i Elon Musk tany Aostralia dia efa nanaporofo ny zava-bitany tamin'ny fanombohana tao anatin'ny 140 ms fotsiny taorian'ny fahatapahana
Opera 50 dia hampifangaro ny fiarovana ny tera-tany amin'ny fitrandrahana cryptocurrency
Mba hisorohana ny sakaizan'ny olon-kafa tsy manararaotra mpampiasa sasany, dia hanangana ny fanakanana cryptocurrency amin'ny endriny manaraka ny Opera
Ireo hackers dia mety ho tsara ihany koa, hoy ny RAE
Ny Royal Academy of the Language, dia vao avy nanaiky ny dikany faharoa ho an'ireo mpijirika, ankehitriny dia izy ireo ihany koa no lehilahy mahay amin'ny sarimihetsika
Rosiana iray no maty rehefa nankafy ny zava-misy virtoaly
Ny taona 2016 no taona niavian'ny zava-misy virtoaly lasa zavatra mihoatra ny ...
Ny famahana ny findainantsika smartphone amin'ny USB ampahibemaso dia hevitra ratsy be
Ny baterian'ny smartphone dia mitohy, ary ho an'ny ankehitriny dia hitohy hatrany, olana iray izay hanery antsika tsy maintsy ...
Mercedes sy ny Linkin Park Group dia miara-miasa mba hamoronana feo tonga lafatra ho an'ny fiara elektrika
Hiara-miasa amin'ny vondrona rock Linkin Park i Mercedes, mba hamoronana feo mandeha tsara ho an'ny fiara elektrika AMG an'ny orinasa Bavarian
Fanadihadiana tilikambo feo Energy Energy Multiroom WiFi
Jereo ny tilikambo fanamafisam-peo Energy Sistem Multiroom WiFi, vokatra iray izay manome vidiny € 130 ho antsika kalitao tsara sy fampiasana mora foana.
Eric Schmidt dia nidina ho CEO amin'ny alfabeta (Google)
Eric Schmidt, tale jeneralin'ny Google izay nampiasa iPhone, ilay lehilahy nanangana demokrasia ny serivisy an-tserasera eran'izao tontolo izao, dia miala amin'ny toerany ao amin'ny Abidia.
Mampiray ny iOS sy macOS? Miverina amin'ny drafitr'i Apple ny hevitra
Raha ny marina dia tsy laharam-pahamehana mihitsy io olana io tany Cupertino, farafaharatsiny mba izay no nampahafantaran'izy ireo azy hatrizay ...
Izahay dia mamakafaka ny monitor 27-inch Philips monitor (276E7QDSW) amin'ny GIVEAWAY
Nodinihinay ny monitor 27-inch Philips monitor (276E7QDSW), saingy mitondra vaovao tsara kokoa ho anao izahay, mety ho anao izany amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny fanomezana fotsiny.
Apple Park tamin'ny volana desambra 2017: horonantsary fahitana drôna vaovao
Nanaitra antsika indray i Matthew Roberts tamin'ny fitsidihana fitsidihana drôna namakivaky ny Apple Park sy ny toetrany hatramin'ny Desambra 2017
Angony ny karama amin'ny bitcoin? Any Japon dia azo atao izany
Ny tsy noeritreretinay dia hoe fomba fandoavam-bola izao, fa afaka mandray ny karamanay amin'ny bitcoin.
Nesorin'i Microsoft tao amin'ny Microsoft Store ny browser Google an'ny Google noho izy tsy mahafeno ireo torolàlana
Ny launcher Chrome azo jerena ao amin'ny Microsoft Store dia voarara tsy hiditra ao amin'ny Microsoft Store, manitsakitsaka ny làlan'ny fivarotana
Mandinika ny ASUS ZenBook Pro izahay, ny fampisehoana sy ny famolavolana dia miara-miasa
Izahay dia nanandrana ny ASUS ZenBook Pro UX550VD ary milaza aminao ny zavatra niainanay, handinika izany amin'ny antsipiriany izahay.
UPS dia manafatra kamio elektrika 125 avy any Tesla
Vaovao tsara ho an'ireo orinasa roa tonta satria ny Tesla dia manana an'ity baiko lehibe voalohany amin'ny andiany ...
Porg Invasion, ny toetra mampiavaka ny Star Wars dia efa manana minigame
Azontsika atao ny maneho ny BB-8 amin'ny ady hafahafa hibaiko ireo Porg ao anatin'ny Millennium Falcon.
Hiara-miasa amin'ny fanamboarana batery ho an'ny fiara elektrika ny Panasonic sy Toyota
Ny orinasa Japoney, Panasonic sy Toyota dia nanao fifanarahana hanamafisana ny fanamboarana sy ny famolavolana bateria ho an'ny fiara elektrika.
Famerenana fanadiovana volo tsy misy tariby Holife tanana
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanana fotoana nisedra gadget vaovao ho an'ny trano izahay, ilay mpanadio vovo tsy misy tariby Holife, ...
Apple dia hanao premiere miaraka amin'ireo tompon-tany aminy Steve Jobs Theatre, Apple Park
Ary izany ve ny fanombohana ireo maodely vaovao an'ny iPhone 8, 8 Plus ary ny iPhone X dia ...
Mila bateria amin'ny Nintendo Switch anao ve ianao? ZeroLemon no mitondra anao
ZeroLemon Battery Charge Case, rafitra iray izay manome antsika fahaleovan-tena mandritra ny folo ora fanampiny amin'ny Nintendo Switch.
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy i BlackBerry KeyONE
Androany dia tonga eo amin'ny tsena Espaniôla ny BlackBerry KeyONE, rehefa tsy misy mila izany dia tsy nisy nangataka izany ary tsy nisy nanampo an'izany.
Izahay dia mamakafaka ny Samsung MU6125 TV, 4K ary HDR 10 amin'ny serivisy eo afovoany
Samsung MU6125, fahitalavitra afovoany izay mitondra vahaolana 4K sy HDR 10 ho an'ny paosy rehetra, andao handeha any miaraka amin'ny famakafakana.
Azonao atao ny manakana an'i Mark Zuckerberg ao amin'ny Facebook
Raha efa nalaim-panahy hanakana ny kaontin'i Mark Zuckerberg tao amin'ny Facebook ianao dia ho hitanao ny fomba tsy nahafahanao nanao farafaharatsiny raha tsy roa andro lasa izay.
Chrome 64 dia hamela anao hangina horonan-tsary milalao ho azy
Ny kinova Chrome 64 vaovao dia hanana safidy takian'ireo mpampiasa azy: ahafahana mampangina ny horonan-tsary izay lalaovina ho azy
Manavao ny SPC miaraka amin'ny fanontana voafetra noforonin'i El Dios de los Tres
Ity fanangonana vaovao avy amin'ny SPC miaraka amin'ny El Dios De Los Tres ity dia aingam-panahy avy amin'ny fomba taloha sy ny sary dia mampiditra loko mamirapiratra.
Hodinihinay ny Amazon Fire Stick TV, fomba hafa mahaliana kokoa noho ny Chromecast
Tao amin'ny Actualidad Gadget dia nanomboka niasa izahay ary holazainay aminao ny momba ny zavatra niainantsika tamin'ny Amazon Fire TV Stick Basic Edition.
Tsy avelan'ny Google Maps hitsambikina ny fijanonan'ny fitateram-bahoaka manaraka
Google Maps ho an'ny Android dia manampy fiasa vaovao tena mahaliana ho an'ireo izay mampiasa fitateram-bahoaka isan'andro. Amin'izao fotoana izao dia ho an'ny Android ihany
Chrome dia hamela antsika hampangina ny filalaovana video ho azy
Ny fanavaozana ny Chrome manaraka dia ahafahantsika misoroka ny famoahana horonantsary mandeha ho azy, amin'ny tranonkala tadiavinay.
NASA dia nanambara ny fahitana planeta vaovao
Noho ny fampiasana rafi-pitsikilovana noforonina noforonin'i Google, nahavita nahita planeta vaovao tao amin'ny antokon-kintana Draco i NASA.
Isika rehetra dia mampiasa GIF hatrany hatrany, ireo no be mpitia indrindra amin'ny taona hoy i Giphy
Tsy misy isalasalana fa ny Gifs dia ampiasain'ny mpampiasa mihombo ary tena ilaina amin'ny ...
Araho ny tenifototra, hadalana Instagram hafa mahomby
Ho azonao atao ny manavao ny atiny farany mahaliana momba ny zavatra mahaliana anao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny teny na vondron'izy ireo fotsiny.
Ny Jedi DLC Farany dia tonga tany Star Wars Battlefront
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny orinasan-dahatsoratry ny lalao video dia niasa mafy niaraka tamin'i Disney hanana ny vaovao rehetra.
Call of Duty: WW2 no tampony amin'ny varotra lalao video amin'ny Novambra
PlayStation 4 dia mbola manjaka hatrany Espana hatreto, raha Call of Duty: WW2 dia nahazo mpanaraka maro ary FIFA sisa.
Android Marshmallow sy Nougat dia manjaka amin'ny fitaovana Android
Izahay dia miatrika fanatsarana mazava eo amin'ny fizarazaran'ireo kinova samihafa amin'ny rafitra fiasa ampiasaina amin'ny ...
Apple dia manamafy ny fahazoana an'i Shazam, veloma ny lehibe
Ny orinasa Cupertino dia nanapa-kevitra ny hividy an'i Shazam ho olo-malaza amin'ny astronoma, na dia tsy lehibe araka ny noeritreretina aza.
Apple dia mety manova ny batterie mba hampitombo ny asany
Ny tsaho farany momba ny fanatsarana ny fahombiazana amin'ny fanoloana bateria dia nipoitra tao amin'ny Reddit, toa ny Apple no manery ny tsy fahombiazany.
Ny Xiaomi Mi A1 dia zara raha misy nefa efa manomboka mahazo Android 8.0 Oreo izy ireo
Toa hafahafa ihany aza fa ny fitaovana sarotra azo dia efa nanomana na efa mandray ny fanavaozana ny ...
Ireo no horonan-tsary malaza indrindra tao amin'ny YouTube tamin'ny 2017
Andao hojerentsika hoe iza no horonan-tsary malaza indrindra tao amin'ny YouTube nandritra ny taona 2017, na tany Espana na eran'izao tontolo izao.
Ny fisian'ny bakteria sasany ao amin'ny vavoninao dia mety hampihena anao haingana
Ity fandalinana vaovao natao tany Danemark ity dia mampiseho fa azo atao ny mahafantatra hoe sakafo inona no halehanao arakaraka ny bakteria ao amin'ny vatanao.
Ahoana no hahalalana hoe ora firy ianao no nihaino mozika tao amin'ny Spotify nandritra ny 2017
Fantaro miaraka aminay hoe adiny firy ianao no nihaino mozika tao amin'ny Spotify nandritra ny taona 2017 niaraka tamin'ny dingana vitsivitsy.
Apple dia afaka nanambara ny fividianana an'i Shazam androany
Araka ny tsaho marobe, ny fividianan'i Apple ny serivisy fankalazana mozika an'i Shazam dia azo ambara anio
Amin'ny taona 2018 dia azonao atao ny manova ny anaranao amin'ny PlayStation Network
Nanambara i Sony fa mandritra ny taona 2018 ho avy dia afaka manova ny anaranao amin'ny PlayStation Network ianao, tonga ny fotoana hanombohana mamorona.
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia tonga ao amin'ny Photoshop ihany koa mba hanesorana ny mombamomba ny sary
Noho ny faharanitan-tsaina artifisialy, ny andiany manaraka an'ny Photoshop dia hamela antsika hitifitra ny mombamomba ilay zavatra lehibe amin'ny fomba tena tsotra.
Bixby dia efa amin'ny teny espaniola, fa ho an'i Etazonia ihany
Ary io ilay mpanampy Samsung dia toa nametraka ny batery tamin'ny fiteny, ary ...
Ankafizo ny fiandrasana mandra-pahatongan'i Dadabe Noely miaraka amin'ny «Araho i Santa Claus»
Herintaona vaovao indray, noho ny Google, azontsika atao ny manao ny andro alohan'ny Krismasy ho mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa.
Ireo no emoji vaovao ho an'ny taona 2018 ary misy ny manana safidy hanodinana azy ireo
Tsy manana ahiahy izahay fa hanatsara hatrany ny emoji amin'ny kinova sy fanavaozana ho avy tahaka ny efa nataon'izy ireo ho an'ny ...
Pixelmator Pro, safidy iray hafa amin'ny Photoshop ho an'ny mpampiasa Mac, dia mamely ny tsena
Ny kinova matihan'ny Pixelmator Pro dia lasa safidy tsy manan-kery kokoa ho an'ny mpampiasa Photoshop rehetra.
Android 8.1 Oreo dia efa ofisialy, asehonay anao ny vaovao rehetra
Efa manana ny fanavaozana lehibe voalohany an'ny rafitra fiasa Android 8 Oreo isika, amin'ity tranga ity dia ny dikan-teny ...
AquaWeb, fomba vaovao ahazoana rano miorina amin'ny natiora
AquaWeb dia rafitra vaovao noforonin'ireo manampahaizana manokana afaka mahazo rano voajanahary avy amin'ny orana ary na ny hamandoana aza amin'ny tontolo iainana.
Windows dia mila AirDrop azy manokana eo anelanelan'ny iOS sy PC
Ahoana raha namoaka fampiharana i Microsoft? Miasa amin'ny Redmond izy ireo, ary izany dia afaka manana ny AirDrop azy manokana i Windows.
Lyric C1 WiFi avy any Honeywell, filaminana sy filaminana amin'ny vidiny mirary [Analysis]
Izahay dia mitondra anao ny famakafakana ny iray amin'ireo vokariny izay mahatonga ny tranonao ho toerana azo antoka kokoa sy marani-tsaina, ny fakan-tsary Lyric C1 miaraka amin'ny fifandraisana WiFi.
Ny faharefoana ao amin'ny macOS High Sierra dia manome fidirana amin'ny Mac amin'ny mpitantana. Manome anao vahaolana vonjimaika izahay
Ny fahalemena lehibe farany izay misy fiatraikany amin'ny rafitra fiasa dia hita ao amin'ny macOS High Sierra ary misy fiantraikany amin'ny Apple Macs.
Audi Escape Room mitsidika an'i Madrid mba hampiroborobo ny teknolojia misy ny herinaratra misy azy
Raha manontany anay momba ny fiara elektrika ianao dia mety ho tonga ao an-tsainao aloha i Tesla, ...
Imgur dia voajirika tamin'ny 2014 ary hitany tamin'ny faran'ny 2017
Imgur, vavahadin-tsary malaza, dia voan'ny hacker taona maro lasa izay. Taona maro taty aoriana dia mahatsapa izany ary mampitandrina ireo mpampiasa azy
Ahoana ny fomba hijerena an-tsokosoko ny tantara Instagram
Te-handeha tsy voamariky ny Instagram Stories ve ianao? Eny, efa misy ny vahaolana amin'izany. Ary holazainay aminao eto ambany izany
Amazon dia mitady mpaninjara any Espana amin'ny € 14 ora iray, apetrakao ny ambiny
Ny tolotra asa farany nataon'i Amazon dia tena hafahafa, handoa anao amin'ny vidin'ny € 14 isan'ora raha mizara ny fonosany ... hafetsena sa fitsaboana?
Aukey LC-C1, Qi vola haingana ho an'ny mpijery rehetra [Giveaway]
Amin'ity indray mitoraka ity dia hamakafaka ny Aukey LC-C1, charger tsy misy tariby Qi misy famandrihana haingana izay tsy ho voamariky ny olona.
Nodinihinay ireo kapila fandraisam-peo H501, 233621
Mandeha any izahay miaraka amin'ny fandalinana lalindalina kokoa amin'ny H501, headphone sinoa mampanantena fanafoanana am-peo amin'ny vidiny mirary tokoa.
Taona 2009: Ilaina ny Twitter mba hanana fitaovana natokana ho azy
Ny taona 2009 dia fahombiazana lehibe ho an'ny Twitter: namorona gadget manokana aza ny orinasa hitantanana ny tambajotra sosialy avy eo am-pelatanana
Ny kamio elektrika Tesla dia ho mora kokoa noho ny Roadster vaovao
Nandritra ny fampisehoana ny Tesla Truck, tsy nisy fampahalalana momba ny vidiny. Azontsika atao izao ny manamarina ny vidin'ny kinova roa izay hamidy
Xiaomi dia hivarotra smartphone 50 ho an'ny 1 euro mandritra ny zoma mainty voalohany any Espana
Ny vaovao izay tonga tato aminay avy amin'ny Xiaomi momba ny zoma mainty voalohany tany Espana. Ary ary…
Samsung Galaxy S9 dia azo aseho mandritra ny CES 2018
Samsung dia afaka mandroso ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S9 hatramin'ny volana Janoary. Mba hiavaka kokoa dia ny hampisehoana izany amin'ny CES 2018
Fantatr'i Google ny misy anao, na inona na inona toerana misy anao
Google dia nanamafy tato ho ato fa tsy miraharaha izany raha toa ka navadika ny toerana na tsia, dia fantany ny misy anao amin'ny fotoana rehetra.
Hawaii sy Belzika miady amin'ny boaty valisoa amin'ny lalao video
Toy izao no manomboka ny lalan'ny lalàna amin'ny fomba hanombohana mifehy an'io karazan-joba io izay miteraka resabe.
Niaiky i Uber fa niharan'ny hack taminà mpampiasa 57 tapitrisa izy ireo
Vao nanamafy tamin'ny fomba ofisialy i Uber fa ny kaontin'ny mpampiasa 57 tapitrisa dia voajirika tamin'ny volana oktobra lasa teo ...
Android ho an'ny PC
Jereo ny safidy tsara indrindra hametrahana Android amin'ny PC-nao. Atorinay anao izay safidy sy emulator tsara indrindra hankafizanao Android amin'ny solosainao
Disney Pixar dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny teaser 'Incredibles 2'
Amin'ity fahavaratra ity dia havoaka amin'ny sinema ny tohin'ny "The Incredibles", ny sarimihetsika The Incredibles 2….
TIME dia manana ny fitaovana folo tsara indrindra amin'ny 2017
Hahafantatra bebe kokoa amin'ny lalina isika hoe inona ny fitaovana tsara indrindra tamin'ny 2017 ho an'ny magazine TIME tsy misy fifanakalozan-kevitra.
Raiso ny Devolo 1200+, ny PLC tsara indrindra eny an-tsena amin'ity fanomezana ity
Faly izahay milaza aminao fa afaka mahazo iray amin'ireo vokatra mahafinaritra ireo ianao maimaim-poana. Ampidiro ary fantaro ny fomba.
Araraoty tsara ny tolotra zoma mainty nefa aza diso lalana
Raha te hanararaotra ny tolotra mahaliana ianao mandritra ny zoma mainty, dia tokony horaisinao ny tolo-kevitra sasany mba tsy hamitaka anao.
Ny taranaka faharoa an'ny Tesla Roadster, ny 0 ka hatramin'ny 100 ao anatin'ny 2 segondra
Ny taranaka faharoa an'ny Tesla Roadster dia ofisialy izao. Ity fiara fanatanjahan-tena mandeha amin'ny herinaratra vaovao ity dia manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 2 ao anatin'ny XNUMX segondra
Tesla Semi, ity ny kamio elektrika an'i Elon Musk
Tesla Semi no kamio elektrika voalohany an'ny Tesla Amerikanina. Izahay dia manazava izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny kamio manaraka amin'ny ho avy
Ny fiaran-dalamby amin'ny ho avy dia hanana gym, efitrano fanaovana lalao video ary faritra iasana
Ideenzug dia tetikasan'ny orinasan-dalamby alemà Deutsche Bahn, lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Karohina ny lamasinina ho avy
Izahay dia mamakafaka ny mpandahateny CSR, iray amin'ny premium indrindra amin'ny AUKEY
Andao hojerentsika lalina kokoa ity mpandahateny CSR natolotr'i Aukey ity antsika.
Cristóbal, ilay anjely mpiambina anao eo am-pamiliana. Ity no prototype SEAT vaovao
Ny tontolon'ny fiara dia mifamatotra hatrany amin'ny teknolojia ary amin'ity tranga ity ny mpitantana ...
Mamela anao hividy tapakila fampisehoana i YouTube
YouTube dia nanao sonia fiaraha-miasa amin'ny sehatra Ticketmaster. Manomboka izao dia azo atao ny mividy tapakila fampisehoana amin'ny serivisy streaming
Asan'ny tsirairay ny asa an-trano ary tadidin'i Samsung #YaNoHayExcusas
Ankehitriny dia toa somary "ratsy tarehy" ihany ny miresaka miresaka fizarana raharaha an-trano amin'ny olona ary ...
Ireo no tolotra tsara indrindra amin'ny «Countdown» ho an'ny Zoma Black Black
Efa akaiky ny zoma mainty isika, manomboka manafana motera foana i Amazon, izany no ...
Ny tombony azo amin'ny Black Friday dia alohan'ny Geekbuying
Hanome anao fitsidihana kely izahay, izay ny vokatra tsara indrindra azonao raisina amin'ny tolotra Geekbuying ankehitriny amin'ny vidiny tsy hita lany.
Ny Firefox Quantum dia tonga mba hamela anao hiala amin'ireo mpitety tranonao hafa
Firefox Quantum no kinova mahery indrindra an'ny mpitety tranonkala Mozilla. Haingam-pandeha kokoa, mandany RAM kely noho ny Chrome, ary manana UI vaovao
Alibaba Group dia manapaka ny firaketana ny varotra ao anatin'ny iray andro amin'ny 11/11
Amin'ny asabotsy 11 amin'ny 11 dia ankalazana any Shina ny Andro Mpihira fanta-daza, ary ho an'ny orinasa lehibe maro ...
Ireo no terminal mifandraika amin'i Harry Potter: Wizards Unite
Ity ny lisitry ny telefaona izay hifanaraka amin'i Harry Potter: Wizards Unite, ilay Pokémon Go vaovao miorina amin'ny tontolo Harry Potter.
Atsangano ny efijery findainao hikarakarana ny lamosinao sy ny tendanao
Ianaro miaraka aminay ny fomba hanatsarana ny fihetsikao sy ny fahasalamanao amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny solosaina finday sy monitor faharoa.
Face ID resin'ny sarontava
Ny orin'asa Vienamite Bkav dia nahavita nandingana ny fiarovana ny Face ID amin'ny iPhone X noho ny fampiasana sarontava natao pirinty tamin'ny teknolojia 3D
SPC Smartee Sport, nanandrana ity fiambenana lafo vidy ity izahay
Mijanona miaraka aminay ary jereo akaiky ny SPC Smartee Sport, ilay smartwatch mihodina.
Xiaomi dia tsy mijanona ary manomana ny fisokafan'ny fivarotana 10 eo ho eo any Espana
Ary vao tsy ela akory izay no nanamafisanay ny vaovao momba ny fipetrahana ofisialy Xiaomi any Espana sy ny ...
Ny tambajotran-tserasera fohy Musical.ly dia manova ny tompony amin'ny $ 1.000 lavitrisa
Ny tambajotran-tserasera misy horonan-tsary miaraka amin'ny mozika hatramin'ny 15 segondra ny halavany ho an'ny tanora dia novidina 1.000 tapitrisa dolara.
Mampanantena i Disney fa ho mora vidy kokoa noho ny Netflix ny sehatra misy azy
Androany ny tale jeneraliny ankehitriny dia nampandre vaovao iray manan-danja fotsiny, ny votoatin'ny atiny takiana amin'ny fangatahana dia ho mora kokoa noho i Netflix.
YouTube amin'ny hadilanana ady mba hahatonga ny YouTube Kids ho toerana azo antoka
Ity no nanapa-kevitra ny YouTube hijoro amin'ireo atiny manelingelina ao amin'ny YouTube Kids, ka hahatonga ny sehatra ho toerana azo antoka.
Ny OnePlus 5T dia miharihary amin'ireo famoahana ireo
Ireo singa voalohany amin'ny OnePlus 5T dia efa hita ao amin'ny Twitter sy Reddit, andao jerena ireo fiasa sy endrika
Manolotra ny eo an-toerana ny Facebook, ny fampiharana fampiharana vaovao
Foursquare sy TripAdvisor dia rindranasa izay nanampy anay hatry ny ela hitantanana ny fialam-boly rehefa ao ...
Toa manomboka mihidy ny lavaka ao amin'ny sosona ozone
Ireo mpahay siansa sy mpikaroka avy ao amin'ny NASA sy ny National Oceanic and Atmospheric Administration dia nanambara fa mihidy ny lavaka ao amin'ny sosona ozone.
2018 no mety ho taonan'ny Barcelona nampiantrano ny MWC
Ny fikambanana MWC, GSMA, dia miahiahy momba ny tsy fandriam-pahalemana politika ao Barcelona tato anatin'ny volana vitsivitsy ary mieritreritra ny hamela an'i Barcelona ho foibe izy
Ny Xiaomi Mi Mix manaraka miaraka amin'ny "notch" an'ny iPhone X?
Ary io dia ilay antsoin'izy ireo hoe Apple Apple. Misy tsaho manodidina ny tambajotra niely ...
Vespa Elettrica, ilay modely italiana tsy misy lasantsy lasa zava-misy
Piaggio dia hanangana modely amin'ny Vespa herinaratra feno angano amin'ny taona ho avy 2018. «Vespa Elettrica» no anarany ary mahaliana ny fizakantenany
Lamborghini Terzo Millennio, supercar elektrika misy teknolojia futuristic
Lamborghini dia mampiroborobo ny fiara misy azy manaraka. Ity no supercar elektrika feno Lamborghini Terzo Millennio
Google Assistant izao dia mamantatra ireo hira ho Shazam
Izao dia nanamafy ny Google Assistant fa ho afaka hamantatra haingana ireo hira amin'ny fihainoana azy ireo fotsiny.
Ethereum Inona izany ary ahoana no fomba hividianana ny Ethers?
Ny momba an'i Ethereum sy Ethers, ny fifaninanana vaovao sy ny fifanakalozana cryptocurrency an'ny Bitcoin. Jereo hoe aiza ary ahoana no hividianana ny Ethers amin'ny fahatokisana sy antoka.
NichePhone-S telefaona Android be karatra
NichePhone-S, telefaona Android izay tsy ampoizina amin'ny habeny miniskule, andao hofantarintsika akaiky kokoa izany.
Ofisialy, tonga any Espana i Xiaomi miaraka amina vokatra sy vidiny tena mahaliana
Taorian'ny tsaho marobe dia natao ofisialy ihany tamin'ny farany, tonga tany Espana i Xiaomi miaraka amina magazay ara-batana roa vaovao sy vokatra marobe amin'ny vidiny ambany.
Ny zava-drehetra momba ny Bitcoin. Inona izany, ny tantara, ny fomba hividianana Bitcoins, ny tombony sy ny fahalemen'ny cryptocurrency malaza indrindra.
Nampanantena anay i Apple tamin'ny famelabelarana fa ny Face ID dia tena marina ka afaka manavaka na dia eo amin'ny samy mpirahalahy kambana aza, saingy toa tsy izany.
Miaraka amin'ity satroka ity dia te hisorohana ny torimaso amin'ny kodiarana i Forders
Ny sehatry ny fitaterana an-dàlana dia iray amin'ireo manandanja indrindra amin'ny firenena rehetra, ary raha tsy izany dia manana ...
IONITY, tambajotranà mpampihorohoro izay te-hivelatra manerana an'i Eropa
IONITY dia te-hampita an'i Eoropa amina tobin-tsolika super 400 ho an'ny fiara elektrika. Izy io dia mpifaninana lehibe amin'i Tesla
Opel dia mivarotra fiara amin'ny alàlan'ny Amazon Spain
Opel dia mametraka ny singa 20 voalohany amin'ny SUV Grandland X amidy amin'ny alàlan'ny Amazon Spain. Haingana ny varotra ary mifanaraka amin'ny famandrihana mialoha
WhatsApp tsy mandeha aminao? Tsy ianao irery, WhatsApp no ​​maty
Fahefatra ambin'ny folo taona nanenenan'ity taona ity, nijanona vetivety ny sehatra fandefasan-kafatra WhatsApp, namela mpiserasera an-tapitrisany tsy afa-nihetsika
Tesla amin'ny ora vitsy, misy fatiantoka an-tapitrisany ary noho ny Tesla Model 3
Tesla dia manana olana amin'ny maodely lehibe indrindra: Tesla Model 3. Ny daty tsy tanterahina ary dolara an-tapitrisany maro no voarakitra.
Matahotra izahay miaraka amin'ny The Impatient in Psychiatric PSVR
Nandeha tany amin'ny PlayStation VR Psychiatric izahay mba hitsapana ny tsy manam-paharetana, ny lohateny horohoro ara-tsaina ho an'ny PS VR ary gaga be izahay.
Mpanonta sary an-tserasera
Raha te-hanitsy ny sarinay isika dia afaka mahita serivisy maro amin'ny Internet. Mampiseho aminao izahay hoe iza no mpamoaka sary an-tserasera tsara indrindra.
Ireto ny premieres Netflix amin'ny Novambra 2017
Izahay dia mitondra anao ny lisitra voafaritra ahafahanao mamantatra izay atiny atolotry ny Netflix Spain mandritra ny volana Novambra 2017
Acumos, satria azo atao ny manana loharanom-baovao artifisialy Open Source
Fidirana izay hiresahantsika momba an'i Acumos, rafi-pitsikilovana artifisialy Open Source novokarin'ny Linux Foundation.
Mpiasa Microsoft iray nametraka Chrome teo afovoan'ny famelabelarana satria nijanona tsy niasa ny Edge
Toa manana drafitra B i Microsoft rehefa tsy miasa intsony ny Microsoft Edge amin'ny famelabelarana: apetraho Google Chrome
Ny zava-drehetra natolotr'i Sony tamin'ny Paris Games Week 2017
Mandeha any izahay miaraka amin'ny vaovao avy amin'i Sony ao amin'ny Paris Games Week 2017, izay ahatongavan'ny The Last of Us: Fizarana II sy ilay tranofiara Farcry 5 vaovao.
Ny Madrid Gaming Experience dia nanome fotoana fialamboly tsara ho anay tamin'ny hetsika maro natao ary koa ny atiny atolotra
Alohan'ny hizarana horonan-tsary dia azonao atao ny manapaka azy ireo mba hahatonga azy ireo ho kely kokoa. Asehonay anao ny serivisy tsara indrindra hanapahana horonantsary amin'ny Internet
Daimler E-Fuso Vision One, ny kamio elektrika voalohany voalohany eto
Fuso-E Vision One no kamio elektrika voalohany an'i Daimler. 350 kilometatra ny fizakan-tenany ary afaka mitatitra 11 taonina
Microsoft Andromeda, ny orinasa dia hiasa amin'ny kahie nomerika
Microsoft Andromeda dia iray amin'ireo tetikasa iasan'ny orinasa Redmond. Io no fananganana indray ny kahie nomerika
Sofia, ilay robot AI izay nandrahona ny hanimba an'izao tontolo izao, dia mahazo zom-pirenena Saudi Arabia
Sofia no robot voalohany teto amin'izao tontolo izao nahazo zom-pirenena avy any Arabia Saodita.
WhatsApp izao mamela anao hamafa hafatra nalefa
Ny safidy nandrasana hatrizay izay mamela antsika hamafa ny hafatra alefa amin'ny alàlan'ny WhatsApp dia misy ary mandeha izao.
Honda dia mampahafantatra an'i RoboCas, vata fampangatsiahana irery miaraka amin'ny bika mahafinaritra
Honda RoboCas dia fieritreretana fiara tsy miankina feno habe kely azo ampiasaina amin'ny sehatra samihafa.
Google mandefa singa Pixel 2 diso amin'ny mpanjifa
Ity singa an'ny Google Pixel 2 noresahantsika ity dia tsy nandalo akory ny fibaikoana ny kalitao anatiny, ary mbola nalefa ihany.
Opel dia tsy manome ampy amin'ny famokarana herinaratra, ny Ampera-e
Tsy maintsy nalain'ny Opel ny varotra ny herinaratra Ampera-e any Norvezy noho ny fangatahana goavambe izay tsy zakan'izy ireo.
Xiaomi dia manamafy ny fahatongavany any Espana
Vao avy nanamafy tamin'ny alàlan'ny Twitter ilay goavambe aziatika Xiaomi amin'ny alàlan'ny Twitter fa tsy ho ela dia hanokatra fivarotana ara-batana any Madrid izay hivarotany mivantana ny vokariny
Ireo no datin'ny tolotra Steam tafaporitsaka
Ny daty fivarotana Steam manaraka dia tafaporitsaka tamin'ny ambin'ny taona 2017, tianao ho fantatra ve izy ireo? Izahay dia mitondra izany ho anao hatrany amin'ny Actualidad Gadget.
Ny ankizy sy ny smartwatch, atambatra azo antoka?
Toa tsy dia mihabe ny fiarovana ny ankizy raha ny fampidirana fitaovana marani-tsaina ao amin'ny saribakoliny kely.
Gigabyte Aorus X9, solosaina finday tena misy
Misy ny mpampiasa manan-danja izay te hilalao laptop ho an'ny filan'ny fivezivezena isan-karazany, Gigabyte dia manome azy ireo ny Aorus X9.
Facebook Messenger dia mamela anao handefa vola amin'ny PayPal
Ankehitriny ianao dia afaka mizara vola mora foana amin'ny namana Facebook amin'ny alàlan'ny rindranasa Messenger izay azon'ny mpampiasa rehetra ampiasaina.
Ilay antivirus maimaim-poana
Raha mitady antivirus maimaim-poana ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao izay antivirus maimaimpoana tsara indrindra eny an-tsena.
Samsung dia manolotra ny Bixby 2.0, ny taranaka faharoa an'ny mpanampy izay miompana amin'ny fitaovana marani-tsaina
Ny orinasa Koreana dia nanao dingana niaraka tamin'i Bixby nandefa ny taranaka faharoa hitantanana ireo fitaovana marani-tsaina ao an-tranonay.
Ny kinova web an'ny Google Calendar dia havaozina miaraka amina endrika vaovao
Google dia nanavao ny famolavolana Google Calendar tamin'ny farany tamin'ny endriny web mampifanaraka azy amin'ny Material Design
Razer Blade Stealth ary Razer Core V2, ny lalao lehibe indrindra
Ny orinasa gaming Razer dia nanambara ny filokana vaovao 2017, ny solosaina finday Razer Blade Stealth 2017 ary ny Razer Core V2 GPU ivelany
La Caixa sy ImaginBank dia mifanaraka amin'ny Apple Pay izao
Ny mpanjifa La Caixa sy ImaginBank dia afaka mampiasa ny carte de crédit sy debit miaraka amin'ny serivisy Apple Pay manomboka anio
Tonga ny Huawei Mate 10 sy Mate 10 Pro: Vidiny sy fiasa
Huawei Mate 10 sy Mate 10 Pro, aza hadino ity lahatsoratra ity izay holazainay aminao ny vidiny, ny masontsivana ary ny fotoana ahafahanao mividy azy ireo.
Soso-kevitra hanararaotana betsaka ny mpanonta anao
Iza no tsy nahavita ny mpanonta tamin'ny fotoana tsy nety indrindra? Izahay dia mitondra ny tetika farany tsara hanararaotana ny mpanonta ary tsy hamela anao hidina.
Fijerena ny tetikasa GP90, mora vidy ary tena mahaliana
Famakafakana ny tetik'asa GP90: tadiavo izay rehetra azon'ny projecteur toa ny GP90 atolotra, maodely mora vidy ary ambonin'izany rehetra tena mahaliana ny manomboka azy.
Microsoft Edge dia manao ny premiere ofisialy azy ao amin'ny Google Play
Microsoft Edge dia azo alaina ao amin'ny Google Play amin'ny fomba ofisialy, na dia mbola ao amin'ny kinova beta aza.
Ity no fakantsary fiasa vaovao nataon'i Casio aingam-panahy avy amin'ny fiadian'ny Iron Man
Ny orinasa Japoney Casio dia hanolotra amin'ny 27 Oktobra, taranaka vaovao an'ny GZE-1, fakantsary mahatohitra indrindra ho an'ny seho hetsika
BMW Active Hybrid, ilay 'e-bisikileta' vaovao an'ny orinasa Alemanina
Ny orinasa BMW dia nanangana bisikileta vaovao miaraka amina pedal manampy: ny BMW Active Hybrid. Izy io dia manana fizakantena tena tsara sy fitaovana tsara kalitao
Zhiyun Smooth-Q analysis, gimbal ho an'ny smartphone sy fakan-tsarimihetsika fanatanjahan-tena
Amin'izao fotoana izao dia misy Smartphone na Tablet amin'ny ambaratonga antonony afaka maka sary sy horonantsary manana kalitao ...
Horonan-tsary 360º amin'ny finday, izay rehetra ilainao ho fantatra momba izany
Tianay ianao hahafantatra bebe kokoa amin'ny antsipiriany momba ny momba ny horonantsary 360º ary ny fomba ahazoanao tombony betsaka amin'izy ireo amin'ny findainao.
Izahay dia mamakafaka ny headphones bluetooth fanatanjahan-tena avo lenta an'ny Jaybird X3
Fanadihadiana lalina momba ny Jaybird X3, headphone natao hahasalama anao amin'ny feo sy ny fanatanjahantena amin'ny refy mitovy.
Bitcoin dia mihoatra ary mijanona eo ambonin'ny $ 5000
Averina indray, asehon'i Bitcoin amintsika fa ny hatsarany dia tsy mitsahatra mitombo, mihoatra ny $ 5.000
Kindle Oasis, ilay 'eReader' vaovao misy efijery sy mahatohitra rano kokoa
Amazon dia nanolotra ny mpamaky e-book lehibe indrindra ao aminy: ny Kindle Oasis. Ity maodely ity dia manome fanoherana ny efijery sy rano lehibe kokoa
Twitter dia hanisy endri-javatra 'Save for later'
Twitter dia hanangana fampiasa vaovao ho an'ny tambajotran-tseraserany ato ho ato. Izy io dia ny fahafahanao mitahiry bitsika hovakiana manaraka
Ahoana ny famoretana PDF hahazoana toerana kely kokoa
Raha mikasika ny famoretana ireo rakitra amin'ny endrika PDF dia manana safidy maromaro isika, misy ny mandoa ary ny hafa kosa maimaim-poana. Atorinay anao ny safidy tsara indrindra.
Fanitarana sandoka antsoina hoe Adblock Plus ho an'ny Chrome no mahatratra ny Web Chrome Store
Ny fanitarana vaovao mitondra ny anarana Adblock Plus dia nahatratra ny magazay extension Chrome, extension izay tsy ilay tena izy
OnePlus dia manangona angon-drakitra manokana avy amin'ireo mpampiasa nefa tsy nahazoana alalana
Hitan'ny mpahay siansa amin'ny informatika fa manangona sy mandefa data sy fampahalalana manokana an'ny mpampiasa azy sy ny terminal-n'ny OnePlus
Samsung dia mandefa robot vacuum cleaner mitovy amin'ny Darth Vader
Samsung dia mikendry ny trangan-javatra Star Wars, hany ka nandefa maodely fanadiovan-drivotra robot roa izy ireo izay maneho ny tarehin-tsoratra avy amin'ny Star Wars saga.
Telegram dia havaozina ary mamela anao hizara ny toerana misy anao amin'ny fotoana tena izy
Amin'ny Telegram izao ianao dia afaka mizara ny toerana misy anao amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ireo namanao, iray amin'ireo fiasa vaovao izay mahatonga an'i Telegram hisolo ny WhatsApp.
Herintaona taorian'ny nanambarana azy dia azo sintonina izao ny extension 1Password ho an'ny Microsoft Edge.
WhatsApp Business dia efa zava-misy izay sedraina any Espana ary anio dia lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ity kinova fampiharana ity.
CAT dia manolotra ny vaovao farany amin'ny telefaona mahatohitra azy indrindra, ny telefaona CAT S31 sy S41, mahazaka olona mitaky be loatra.
Ny beta 2 an'ny iOS 11.1 dia ho tonga feno vaovao, manamboatra bug ary koa emojis, izay eritreretinay fa hahatratra ny kinova farany ihany koa.
Avereno ny tenimiafinao Gmail
Azavainay ny fomba hamerenana ny tenimiafin'ny Gmail raha tsy tadidinao izany na tsy azonao idirana ny mailakao Google. Mampianatra anao hanova azy koa izahay
Tian'i Amazon ianao hividy fanafody
Amazon dia handinika fatratra ny hiditra amin'ny sehatry ny fivarotam-panafody hahafahany manome fanafody fanafody an-tserasera
Nambara ny tsiambaratelo nafenina tsara indrindra ao anatin'ny Xbox One X
Andao hojerentsika hoe inona ity atody paska izay nafenin'ny orinasa Microsoft tao amin'ny Xbox One X ity, misy olom-pantatr'i Microsoft taloha.
Airbus hanandrana ny fiarakaretsany manidina CityAirbus amin'ny taona 2018
Airbus dia mikasa ny hitsapa ny fiarakaretsany manidina amin'ny taona ho avy. Ny fitsapana voalohany nataon'ny CityAirbus dia vita soa aman-tsara
Ireo no première an'ny Netflix, HBO ary Movistar + amin'ny volana Oktobra
Ity volana Oktobra ity dia misy zavatra tena mahaliana ao amin'ny Netflix sy ny sisa amin'ireo sehatra hodinihina, toy ny Movistar + sy HBO Spain.
Te-hahazo Bitcoin fitrandrahana vola ve ianao? Mora izany noho ny fitrandrahana cryptocurrency ao amin'ny Cloud. Jereo ny fomba fitrandrahana Bitcoin amin'ny fomba mahasoa.
Lazainay aminao ny fomba hamafana ny kaonty mailaka rehetra amin'ny antsipiriany, na inona na inona Gmail, Yahoo na Hotmail
Izahay dia mamakafaka ny Wiko UPulse, finday misy fakan-tsary tsara ary somary lafo
Izahay dia mamakafaka ny Wiko UPulse, finday avo lenta Android avy amin'ny orinasa frantsay izay manolotra iray amin'ireo fakantsary tsara indrindra ao aminy
HP Spectre 13 sy HP Spectre x360, ny solosaina finday avo lenta farany matevina
Ny HP American avaratra dia nandefa ultrabooks vaovao: ny HP Specter 13 sy ny HP Specter x360, ity farany kosa dia dikan-teny azo ovaina
Jereo ny 11 mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Windows 10. Inona no mpilalao mahay mihaino ny hira tianao indrindra? Jereo eto!
Ny hack Yahoo dia nisy fiatraikany tamin'ny kaonty mpampiasa azy rehetra
Nanamafy i Verizon tamin'ny fanambarana iray fa nisy fiatraikany tamin'ny kaonty mpampiasa 2013 miliara ny hack Yahoo tamin'ny 3.000
Inona no vaovao avy amin'ny Google: Pixelbook, Pixel 2 ary maro hafa
Toy izao no nanoloran'i Google ny Pixelbook, ny Pixel 2 ary ny fitaovana hafa mba hananana monopolize ny tsena faran'izay betsaka azo atao.
Izahay dia mamakafaka ilay mpanadio banga robot mora indrindra ao an-tranonao, Homgeek
Andro iray famakafakana iray hafa ao amin'ny Actualidad Gadget, manome anao ny safidy hafa ho an'ny Homgeek's Roomba, ilay mpanadio vacuum vacuum robot mora indrindra eny an-tsena.
Instagram Stories manampy ny mety hanaovana fanadihadiana
Instagram Stories manampy asa vaovao hampitomboana ny fandraisana anjaran'ny mpanaraka: azo apetraka ny polls
PlayStation 4 dia mandefa ny firmware 5.0 misy fiasa vaovao maro
Toy ny mahazatra dia mitondra vaovao izahay ary holazainay aminao hoe inona ny vaovao entin'ity kinova vaovao an'ny PlayStation 4 firmware ity.
Izahay dia mamakafaka ny S-Box, marika fotsy misy TV Box ary fampisehoana tsara
Hodinihinay ny S-BOX, Android TV Box misy marika fotsy izay hahafahana mamela anao handany atiny hatraiza hatraiza, andao hankany.
Inona ny Google Scholar ary ahoana ny fampiasana azy
Raha mbola tsy mampiasa ny Google Scholar ianao, dia hasehonay anao hoe inona izany, ny fomba fiasan'izy io ary inona no tena serivisy Google ity
Facebook dia te hampiasa ny fanekena ny tarehy hanarenana kaonty: veloma tanteraka amin'ny fiainantsika manokana
Amin'ny fanombohana ny iPhone X vaovao sy ny rafitry ny endriny hahafahana mamoha ilay fitaovana, ny ...
TV Box dimy misy Android ho an'ny tetibola rehetra
Mijanona aminay ary fantaro hoe iza no Android TV Box mora vidy tsara indrindra ho anao, mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.